News - Sharaxaad Iyo Falanqeyn Ku Saabsan Tiknoolajiyadda Soo-Saarka Crankshaft
Crankshafts ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa matoorada. Xilligan, qalabka loogu talagalay matoorada gawaarida badanaa waa bir bir ah iyo bir. Sababtoo ah waxqabadka wanaagsan ee jarista birta, daaweynta kuleylka kala duwan iyo daaweynta xoojinta dusha sare ayaa loo sameeyaa si loo hagaajiyo awoodda daalka, adkaanta iyo xirashada caabbinta crankshaft. Qalabka mashiinka birta ayaa leh qiimo jaban, sidaa darteed qalabka birta ee birta ayaa si ballaaran looga isticmaalay gudaha iyo dibaddaba. Hoos waxaan ku soo bandhigi doonnaa tikniyoolajiyadda wax soo saarka crankshaft.
Tiknoolajiyada wax soo saarka Crankshaft:
1. Tiknoolajiyada ridaya ee crankshaft birta ductile
La wareegida heerkulka sare, baaruudda hoose, birta dhalaashay saafi ah ayaa fure u ah soo saarista bir tayo sare leh. Qalabka wax soo saarka gudaha inta badan wuxuu ku saleysan yahay cupola, birta la dhalaaliyayna horay looma siifeynin; tan labaadna waa birta doofaarka oo aad u nadiifsan iyo tayada coke liidata. Waqtigan xaadirka ah, qaab dhalaalidda ka hor-dilista laba-dibedda ah ayaa la qaatay, taas oo u adeegsaneysa 'cupola' si ay u dhalaasho birta la dhalaalay, u baabi'iso foornada dusheeda, ka dibna kululaato oo ay ku hagaajiso isku-darka foornada dabka. Waqtigan xaadirka ah, ogaanshaha qalabka birta dhalaalay ayaa guud ahaan la fuliyay iyadoo la adeegsanayo faaruqin toos ah oo loo yaqaan 'spectrometer'.
Habka wax-u-beddelka saameynta hawada ayaa si cad uga sarreeya habka nooca ciidda dhoobada, iyo saxnaanta sare ee crankshaft ayaa la heli karaa. Caaryada ciidda ee ay soo saartay geeddi-socodku waxay leeyihiin astaamo aan lahayn dib-u-soo-noqosho soo noqnoqota, taas oo si gaar ah muhiim ugu ah crankshaft-ka is-baddalka badan. Waqtigan xaadirka ah, qaar ka mid ah soosaarayaasha crankshaft ee Shiinaha ayaa soo bandhigay habab wax ku ool ah hawo qaadista oo ka socota Jarmalka, Talyaaniga, Spain iyo dalal kale. Si kastaba ha noqotee, wax soo saarayaal kooban ayaa soo bandhigay khadka wax soo saarka oo dhan.
2. Farsamaynta been abuurka ah ee crankshaft birta ah
Sanadihii la soo dhaafay, tiro ka mid ah qalabka been abuurka ah ee horumarsan ayaa lagu soo bandhigay Shiinaha, laakiin tirada oo yar awgeed, oo ay weheliso tikniyoolajiyadda wax soo saarka caaryada iyo tas-hiilaadka kale, qalabka qaar ee horumarsan ma ciyaarin kaalintii looga baahnaa. Guud ahaan, waxaa jira qalab been abuur badan oo duug ah oo u baahan in wax laga beddelo lana cusbooneysiiyo. Isla mar ahaantaana, tikniyoolajiyadda dib-u-dhaca iyo qalabku wali waxay hayaan booska ugu sarreeya, tiknoolajiyad casri ahna waa la adeegsaday laakiin weli ma baahin.
3. Farsamada farsamada farsamada
Waqtigan xaadirka ah, khadadka wax soo saarka crankshaft ee gudaha badankood waxay ka kooban yihiin qalab mashiinno caadi ah iyo qalab mashiinno gaar ah leh, waxtarka wax soo saarka iyo otomatiguna way hooseeyaan. Qalabka rogrogmada badanaa wuxuu isticmaalaa lathe aalado kaladuwan si uu ugu rogo joornaalka weyn ee crankshaft iyo qoorta, iyo xasiloonida tayada hawshu way liidataa, waana sahlan tahay in la abuuro walaac weyn oo gudaha ah, waana adag tahay in si macquul ah lagu gaaro makiinado gunnada. Dhameystirka guud wuxuu adeegsadaa mashiinnada wax lagu shiido crankshaft sida MQ8260 loogu talagalay qashin qubka - nus-dhammeynta - shiidi kara - nadiifinta, sida caadiga ah hawl gacmeed, iyo tayada wax soo saarku waa mid aan degganeyn.
4. Daaweynta kuleylka iyo tiknoolajiyada daaweynta dusha sare
Tiknoolajiyada muhiimka ah ee daaweynta kuleylka ee crankshaft waa daaweynta xoojinta dusha sare. Qalabka cufan ee birta ah ayaa guud ahaan caadi ah oo loo diyaariyey diyaarinta dusha sare. Daaweynta xoojinta dusha sare guud ahaan waxay isticmaashaa qallajinta induction ama nitriding. Crankshafts steel been abuur ah waa la safray oo wareegsan. Qalabka la soo dhoofiyay waxaa ka mid ah AEG mashiinka deminta crankshaft otomaatiga ah iyo mashiinka deminta EMA.
Wuxi Lead qiray Makiinado Co., Ltd. waxay siisaa macaamiisha dhammaan noocyadooda oo dhameystiran adeegyada macdanta birta caadada ah oo leh hawlo gaar ah.